Football Khabar » एमबाप्पेका लागि रोनाल्डो आइडल : मेस्सीबारे के भने ?
फ्रेन्च क्लब पिएसजी तथा फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीका युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तारिफ गर्दै रोनाल्डो आफ्नो आइडल भएको बताएका छन् । हालै ‘ला गाजेट्टो डेल्लो स्पोर्ट्स’सँग कुरा गर्दै एमबाप्पेले आफू सधैं रोनाल्डोबाट प्रेरित हुँदै आएको कुरा बताएका हुन् ।
अन्तर्वार्ताक्रममा एमबाप्पेले रोनाल्डो र अर्जेन्टिना तथा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सीबारे भनाइ राखेका थिए । सोक्रममा एमबाप्पेले आफूले मेस्सीको जस्तो करिअर बनाउन ढिला भइसकेको बताए । ‘मेरा लागि मेस्सीको जस्तो करिअर बनाउन ढिला भइसक्यो । त्यसका लागि म करिअरभरि मोनाकोमै रहनुपर्थ्र्यो,’ एमबाप्पेले भने, एकै क्लबबाट खेलिरहनु र फरक–फरक क्लबबाट खेल्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ ।’
एमबाप्पेले आफू पहिल्यैबाट रोनाल्डोको करिअरबाट प्रेरित हुँदै आएको र अहिले पनि उनलाई आफूले आदर्श मान्ने गरेको बताए । ‘यसो भन्न कुनै द्वविधिा छैन कि, म रोनाल्डोबाट प्रेरित छु । र, अब पनि उनीबाटप्रेति हुनुपर्छ,’ एमबाप्पेले भने, ‘उनको जस्तो चुनौतीपूर्ण र शानदार करिअर अरूको छैन ।’
एमबाप्पेले रोनाल्डो आफूले सानैबाट सबैभन्दा धेरै हेरेको र पछ्याएको खेलाडी रहेको बताए । ‘किन ढाँट्नु ? उनी मेरा सानैदेखि सपनाका खेलाडी हुन् । अवश्य पनि, म उनलाई मेरो करिअरको आदर्श मान्दछु,’ एमबाप्पेले थपे, ‘म मात्रै हैन, उनी हरेक युवा खेलाडीका ठूलो लागि ऊर्जा हुन् ।’
प्रकाशित मिति १० माघ २०७६, शुक्रबार १९:४२